फेवा बहस : अन्त्य होला त ताल अतिक्रमण ? – Mission Khabar
फेवा बहस : अन्त्य होला त ताल अतिक्रमण ?
मिसन खबर २३ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०६:१८
पोखरा, जेठ । फेवा अतिक्रमणको बहस आज भर्खरै सुरु भएको होइन । निक्कै समय अघिदेखी पोखराको फेवा चर्चा र बहसमा छ । हिजो केवल चर्चामा मात्रै रहेको फेवा अब भने पुरानै स्वरुप र संरचनामा फर्किने आशा बढ्न थालेको छ ।
फेवाको गुमेको संरचना बारे छानविन भैरहँदा यतिबेला पर्यटनविद् कर्ण शाक्यको होटल वाटर फ्रन्टको संरचना बारे पनि अध्ययन अनुसन्धान सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति अहिले फेवाको नापजाँचमा व्यस्त छ । वाटर फ्रन्ट ६५ मिटरभित्र पर्छ वा पर्दैन, होटलबाट निष्कासित पानी प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोग गरिएको छ, वा पानी ढल तालमा मिसाईएको छ ? यसबारे सर्बोच्चको आदेश अनुसार जाँच गरिदैछ । कास्की मालपोत कार्यालयको स्रेस्ता भिडाउने अनि आवश्यक प्रमाण र तथ्यांक संकलन गर्न समिति क्रियाशिल भएको छ ।
समिति संयोजक नारायण रेग्मी सहितको टोलीको व्यस्तता फेवामा बढिरहदा अब फेवाले पुरानै स्वरुप पाउने विश्वास गरिएको छ । फेवाताल मिचेर बनाइएका घर, होटल लगायतका अन्य व्यावसायिक संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्न वैशाख १६ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । २ महिनाभित्र अदालतमा प्रतिवेदन सहित वस्तुस्थिति पेस गर्न आदेश जारी गरिएसँगै अहिले सरकारी टोली सक्रिय बनेको हो । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
फेवतालको अतिक्रमित जमिन छानबिन गर्न २०६९ मा गठित विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्व समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी जलाधार तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सुझाब दिएको थियो ।
२०१८ मा भएको नापीले तालको क्षेत्रफल २० हजार ३ सय ४४ रोपनी देखाएको थियो । २०६४ को ग्रान्ड सर्भेले ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी मात्रै देखाएकाले तालको जमिन अब कति कायम हुन्छ ? तत्कालको प्रतिक्षा बनेको छ ।
क्याटेगोरी : खोज / मिसन, पर्यटन / सम्भावना, समाचार